Kuhle nomkhiqizi ifriji compressor
usekelo lwe-imeyili sales@dm-compressor.com
Call Ukusekela +86 575 83509662
BFS (2-3) amasilinda
4S 4 amasilinda
6s 6 amasilinda
V 4 amasilinda
Y Encane 4 amasilinda
Y 4 amasilinda
W 6 amasilinda
RFC 4 amasilinda
RFC 6 Sikakhiye
ushintsha uba yileli Unit
Semi-hermetic & Intulo samandla iyunithi amanzi COO ...
Ukukhiqiza Umthamo: Pieces 5000 Inyanga ngayinye
Umsuka isitshalo: Zhejiang, China
Samandla umzimba Material: Iron
Amandla (V / Ф / Hz): 380-420 / 3/50, 440-480 / 3/60
Certification: CE, CCC, ISO9001, njll
Inkomba Cross: BITZER, Copeland, INVOTECH
Zhejiang Daming Refrigeration Technology Co. Ltd kuyinto lobuchwepheshe izinkampani ezizimele ezikhethekile ucwaninga ku, ukuklama, esikhiqiza nokumaketha ifriji compressors namayunithi. It has-semi hermetic ifriji compressor brand "Jinming", pheqela ifriji compressor brand "SKROLELA" futhi ephuma kabili hermetic isikulufa ifriji compressor brand "RFC".
Inkampani ine unqambothi ifriji compressor base ukukhiqizwa e China, kanye isitshalo kuka 10,000 square metres, ukwethulwa ezihlukahlukene amazwe eziphambili processing imishini, usethe yesimanje ifriji compressors futhi ushintsha uba yileli iyunithi umhlangano line, futhi ifakwe professional ishede isikhungo kanye Logistics ukusatshalaliswa isikhungo.
Le nkampani ine eminyakeni engaphezu kuka-30 ifriji compressor yokukhiqiza isipiliyoni, kwakhiwa i ifriji omhlaba kanye ezifuywayo elite ithimba, namandla aqinile lobuchwepheshe. Iphinde eqasha uchwepheshe izinhlangano ukuphathwa Consulting ukusungula nokuphathwa kahle imodi yanamuhla ukuze uthuthukise ukuphathwa ezingeni kwamabhizinisi.
Le nkampani ihlose "Yakha brand odumile of China, Dala iminyaka ibhizinisi engamakhulu" bese ulandela nefilosofi ukuphathwa .Kwenze imikhiqizo ephezulu "Quality-ngamakhasimende, Ukuqamba-egxile" nge lokucabanga nelokusungula. Funa amandla okungenamkhawulo innovation.Strive ukwenza "Daming ifriji" brand abadumile, ukuba phezulu nomkhiqizi ifriji compressor e China.
Daming- eqandisiwe umqulu kokucindezelwa ubuchwepheshe inikeza izixazululo esingcono umnkantsha izicelo.
compressor Pheqela kuwukukhetha ekahle enokwethenjelwa, okusezingeni eliphezulu kwegezi compact ohlelweni design.
DM uchungechunge anganikeza imikhiqizo ye 3hp-15hp, futhi refrigerants yayo esebenzayo zihlanganisa R22, R404A, R134A, njll
Double design nezimo
Qinisekisa ukuthi uphawu phakathi akwazi ukugcina umqulu.
Ukuvumela imiqulu ukuba radially futhi axially ahlukaniswe,
doti noma uketshezi ingase idlule imiqulu ngaphandle kokulimaza compressor.
*Ephakeme isikhathi ukusetshenziswa nokwethembeka.
*Better ukubekezelelana ketshezi.
*Better okuphothula ukubekezelelana.
amandla High kahle isilinganiso
I disc umqulu isebenza kunokuba bakhathale
* Ukusebenza Ukwandiswa nge egijima isikhathi.
* Kahle High volumetric
Umsindo Lower & vibration amazinga
Smooth umsindo spectrum & ezithambile izinga umsindo
* Ukuminyanisa ekamelweni uhlale ziyalingana
* Ukucindezeleka ephansi kakhulu ongenakulinganisela
* High-ngokunemba senqubo yokukhiqiza
* Ayikho idivayisi vibration ukumuncwa
Izikhwepha High esiyinhlanganisela metal eziveza
* Isikhala yobudala izinto
* Ethusi ukungena nakwamanye amazwe.
* PTFE enamathela
* Nweba isikhathi egijima ngaphandle Lubrication ngokugcwele
* Coefficient encane kakhulu friction
Athula uqalisa ubuchwepheshe
Izingxenye onomfutho kuthiwa bahlukana emva ukuvala shaqa ukulinganisela ingcindezi sangaphakathi compressor, ngaphandle isidingo sokuqala idivayisi eyengeziwe.
Model Cross inkomba Ithebula
HP AMANDLA IZINGA DAMING SKROLELA MODEL Copeland MODEL INVOTECH MODEL
Cooling Umthamo (C / C)
Model Ushintsha uba yileli lokushisa (° C) Ahwamukayo lokushisa (° C)
DB21KE-S2F C / C (KW) 30 3,45 4,31 5.25 6.35 7,65 9,11 11.7
50 2,43 3.01 3,65 4,45 5,41 6,45 7,71
AMANDLA (KW) 30 1.87 1.87 1.87 1.85 1.85 1,84 1,84
40 2,34 2,34 2,34 2,33 2.32 2,31 2,29
50 2,95 2.93 2.93 2,92 2.91 2,89 2,87
QAPHELA: 1.Test Isimo: ukuncela igesi temperature18.3 ° C, supercooling degree 0 K
2.The aphansi ukuhwamuka lokushisa: -12 ℃
capacitor sokuqalisa (1 PH)
Crankcase Ukushisa amandla
Foot obandayo Ubukhulu. (Imbobo)
Daming: Lwela izinto zobuchwepheshe obuphambili ukuze ukunikeza amakhasimende ne imikhiqizo engabizi.
• Kumele engaphezu kwengu-30 isipiliyoni professional njengoba nje inkampani ye compressor semi hermetic, pheqela compressor, isikulufa compressor, ushintsha uba yileli iyunithi.
• Senza compressors ngokuvumelana nokusebenzisa kwakho.
• Kumele ucwaninga eqinile futhi ithimba ekuthuthukiseni ukuhlangabezana nemfuneko yakho.
• Ziningi abahlinzeki impahla eluhlaza emhlabeni embonini yethu, imboni yethu itholakala isifundazwe Zhejiang, China.
• Sisabalalisa eliphezulu compressors izinkampani eziningi futhi kubakhiqizi emhlabeni wonke, ukuze.
• imboni yethu ithole ISO 9001 futhi CE isitifiketi, okubaluleke esinalo imboni eyakha phezu 20,000 metres square base ukukhiqizwa.
• Ama-oda Isivivinyo Small kungenziwa amukelwe, isampula iyatholakala.
• Intengo wethu uyacabangela futhi ugcine izinga phezulu ngoba zonke amaklayenti.
• Ama-oda Small Wamukele • Izingxenye Brand-igama • Izwe lendabuko • Distributorships Kunikezelwe • Xhumanisa Electronic • abanolwazi Abasebenzi • Ifomu A • Green Product • International Ukuvunyelwa • Izindleko-ngempumelelo • Imininingwane Military • Impahla Standard • Okuhle Inani • Idumela • ngokwezifiso • Umkhiqizo Ukusebenza • Ukulethwa Yazisa • Ukuvunyelwa Quality • Nikeza Izikhungo Okuhle • Isampula Iyatholakala
Inkokhelo Imigomo: Advance TT, T / T, L / C.
Delivery Yekuchumana: Zingakapheli izinsuku 30-50 emva eqinisekisa oda.
Ukuze uthole imininingwane engaphezulu, sicela ukulanda ikhathalogi noma xhumana yokuthengisa, siyabonga.
DAMING: Siyakwamukela ukuvakashela factory sethu!
Previous: DAMING SKROLELA compressor DM260HM-T3F (380V / 420V, 3PHASE, 50HZ, R22)
Okulandelayo: SCROLL COMPRESSOR (380V/420V,3PHASE,50HZ,R404A) refrigeration cold room compressor supplier
10hp Pheqela samandla
12hp Copeland Pheqela samandla
2 Sikakhiye samandla
3hp Pheqela samandla
4 Sikakhiye samandla
5hp Pheqela samandla
6 Sikakhiye samandla
Cold Igumbi Unit
Samandla Ukuze Refrigeration
Copeland lokushisa okuphansi Pheqela samandla
Copeland Pheqela samandla
Copeland Pheqela samandla Unit
High Quality Pheqela samandla
Izinga Lokushisa Eliphezulu Pheqela samandla
Okuphansi lokushisa samandla
Izinga Lokushisa Eliphansi Pheqela samandla
Temperature okulingene Pheqela samandla
R22 Pheqela samandla
R404a Pheqela samandla
R410a Pheqela samandla
Semi-Kuvaliwe Piston samandla
Samandla Semi-afakwe ezimvilophini
Semi-afakwe ezimvilophini Piston samandla
Daming Pheqela compressor DM86HM-T3F (380V / 420V, 3 ...
Daming Pheqela compressor DM50HM-T3F R22 (380-420 ...
Zhejiang Daming Refrigeration Technology Co., Ltd. kuyinto lobuchwepheshe izinkampani ezizimele ezikhethekile ucwaningo, design, ukukhiqiza kanye emakethe ifriji compressors kanye ifriji amayunithi.